Izindaba - Ungasigqoka kanjani isondlo se-smart bracelet?
1. Gcina amadivayisi ahlakaniphile ehlanzekile. Hlanza izihlakala zakho namasongo ahlakaniphile njalo, ikakhulukazi ngemuva kokuzivocavoca, ukujuluka, noma ukuthinta isikhumba ngezinto ezifana nensipho noma okokuhlanza. Lezi zinto zinganamathela ngaphakathi kweringi; Ungasebenzisi okokuhlanza indlu ukuhlanza isongo. Esikhundleni salokho, sebenzisa okokuhlanza okungenayo insipho, hlambulula kahle bese womisa ngethawula elithambile. Ngamabala noma amabala okungelula ukuwasusa, khuhla ngebhulashi elithambile nelimanzi bese ulandela izinyathelo ezingenhla.
2. Hlala womile. Yize amadivayisi ahlakaniphile engenawo amanzi, ukugqoka isongo elimanzi isikhathi eside kuyingozi esikhunjeni sakho; Uma isongo lakho liba manzi, njengasemuva kokujuluka noma ukushawa, ligeze bese ulomisa ngaphambi kokulifaka futhi. Qiniseka ukuthi isikhumba sakho somile ngaphambi kokufaka isongo.
3. Phumuza izihlakala zakho. Qiniseka ukuthi isongo alicinene kakhulu. Qiniseka ukuthi amasongo awaqinile kakhulu. Kunconywa ukushiya isikhala phakathi kwebhande nesihlakala ukuze umunwe omncane ushibilikise emuva naphambili. Uma uyisebenzisela ukuthola ukufundwa kwesilinganiso senhliziyo okunembe kakhulu, ungahle uthande ukubopha isongo ngenkathi uzivocavoca. Uma kunjalo, khumbula ukulungisa ukuqina ngemuva kokuzivocavoca kwakho. Ukuqubuka nobugqila isikhathi eside kungacasula isikhumba sakho, ngakho-ke susa isongo ngehora ngemuva kokugqoka isikhathi eside.